Guddiga Afurinta Boosaaso oo baaq u diray Ummada Soomaaliyeed[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Guddiga Afurinta Boosaaso oo baaq u diray Ummada Soomaaliyeed[Sawirro]
BOOSAASO – Guddiga afurinta magaalada bosaso
Sanad walba waxaan afurinaa dad badan oo masaakiin ah oo isugu jira soomali aan awoodin inay afuraan iyo oromo iyo yamaniyiin magalaada bosaso ku soo qaxay.
Sanadkii Hore waxaa la.afuriyey magaalada bosaso dad gaarayaa 1050 qof dadkaas waxaa lasaaray oo laga afursiiyey maqaaxiyo, waxaa kale oo jirtay qoysas aan waxba haysan oo aan raashin bisha oo dhan ay ku afuraan guryahooda ugu gaynay.
Sanadkana waxaan rabnaa hawshii inaan qabano oo dad badan afurino,dadkaasoo isugu jira qoysas danyar ah iyo ashkaas aan haysan waxay ku afuraan.
Qaybta koowaad ee qoysaska,Qoys walba waxaan ugu talagalinay inaan siino raashin isugu jira ( bur,bariis,sonkor,timir,saliid iyo caano ) oo bisha oo dhan ku afuraan, halkii qoys wuxuu helayaa raashin uu qiimihiisu yahay $68.
Qaybta labaad ee dadka aan qoysaska ahayn waxaan ugu talagalnay qof walba inaan habeenkii ku afurino lacag dhan $3 dollar bishii waxay noqonaysaa $90.
Sanadkan waxaan rabnaa walaalahayaga soomaaliyeed ee ilaah wax siiyey oo ku nool daafa caalamka inay hawshaas nagala qayb qaataan waa waxa ugu wanaagsan oo wax lagu bixiyo, in qof laquudiyo waa wax yaabaha jannada lagu galo.
Waxaad kala xiriiri kartaan gudigga afurinta magaalada bosaso oo aad wixii tabarucaad ah magacooda ku soo dirikartaa:
1) Shiikh Axmed Yuusuf Daad 090 7793171
2) Maxamed axmed cabdalle (xamari) 090 7797872
Akoon sahal ah magaalada bosaso : 402450
Akoon Amal bank bosaso : 1011727625
Akoonka edahab : 54032
Daabacaada: Sahan Online